Zokusombulula Hlola Ivaluva - China Like Valve (Tianjin)
Jonga ukusetyenziswa inkqubo iya nazo iintlobo lwemiba, eli nqaku amava iminyaka emininzi nokuphangalala kwamava yinjineli, lushwankathela iziphumo kwitshekhi vana esembindini eziqhelekileyo iimpazamo. iqhosha lemenyu steel stainless ithemba umhlobo wam una njengesalathisi.
Zokusombulula lokukhangela: 1 disc yoqhawulo; 2 medium umva ...
Phephezela umba owaphukileyo ukuyenza: ngaphambi nasemva ivelufa xi eliphakathi ukusondela ukulungelelanisa kodwa omnye komnye, "bona-wabona" ​​karhulumente, nesihlalo vana bamtyabula ngokufuthi, ezinye izinto ukudleka (ezifana ongangokugibisela isinyithi, nobhedu, njl) wenza wavalwa valve run. indlela stainless Uthintelo pump yombhobho yesinyithi kukusebenzisa i non-esingajijekiyo run kobulembu.
Media reflux kubangela: umonakalo umphezulu 1 uphawu; 2 elimsulwa zidibenene. Ukulungisa uphawu komhlaba uze ususe ubumdaka, nqanda sokuphuma.
Echazwe ngentla apha ngokubhekiselele non-esingajijekiyo iziphene eziqhelekileyo kunye neendlela zokuthintela, ingadlala kuphela emnandi, ukusetyenziswa okusebenzayo, uya nazo ezinye leempumelelo, ukuba athathe amanyathelo ngeemeko ukuthintela ukusilela vana kwenzeka, lowo eyona esisiseko uyiqhelile isakhiwo wayo, izinto kunye nokusebenza siseko.